No. 2149, Sunday, June 9, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2149, Sunday, June 9, 2019
No. 2149, Sunday, June 9, 2019
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၇ ရက် (တနင်္ဂနွေ၊ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၉)
နိုင်ငံတကာ နိုင်ပွဲအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ် ရာမို့စ်စံချိန်တင်
မက်ဒရစ် - ဖာရိုကျွန်းစုကို ၄-၁ ဂိုးဖြင့် နိုင်ခဲ့သော ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲတွင် စပိန်အတွက် ဗွေ ဆော်ဦးဂိုးကို ထောင့်ကန်ဘောမှ တစ်ဆင့် ခေါင်းတိုက်သွင်းယူခဲ့ သော နောက်ခံလူ ရာမို့စ်သည် ဘောလုံးရာဇဝင်တွင် နိုင်ငံတ ကာနိုင်ပွဲအများဆုံးကစားသမား အဖြစ် ကမ္ဘာ့စံ
ရာဖေးနာဒယ်နှင့် ဒေါ့မနစ်သိမ် ပြင်သစ်အိုးပင်း ဗိုလ်လုမည်
ပါရီ − ရိုလန်ဂါးရိုစ့် ဗိုလ်လုပွဲသို့ စပိန်တင်းနစ်ချန်ပီယံ ရာဖေးလ်နာဒယ်နှင့် ဒေါ့မနစ်သိမ်တို့ တက်ရောက်သွားပြီး၊ ယနေ့ ဗိုလ်လု မည်ဖြစ်သည်။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်မည့် လွယ်ကူရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများ
နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးကို ကာလအတန်ကြာအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်းက အနာဂတ်တွင် ယင်းရောဂါများဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန်အထောက်အကူပြုကြောင်း အမေရိကန် နှလုံးရောဂါဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကဖော်ပြထားသည်။
ပေါက်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအပါအဝင် လေးဦးကို အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် ဖမ်းဆီး
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်စွာအုန်းအပါအဝင် လေး ဦးကို အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် အမှု ဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း အဂ တိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်က ဇွန်လ ၈ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အာဏာရှင်လမ်းကြောင်းပေါ်သွားနေကြောင်း ဦးဝီရသူ ဝေဖန်ချက်အပေါ် ဒီချုပ်တုံ့ပြန်
ဒီချုပ်အစိုးရက အာဏာရှင်လမ်းကြောင်းပေါ် သွားနေသည်ဟု ဦးဝီရသူ၏ဝေ ဖန်ပြောကြားမှုသည် မမှန်ကန် ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ် ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က တုံ့ပြန်ပြော ကြားသည်။
သစ်စက်ရုံတွင် လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာလုပ်သား ၁၇၀ ကျော်ကို ထိုင်းအလုပ်ရှင်ထုတ်ပယ်
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆူရတ်ဌာနီခရိုင်တွင် သစ်စက်အလုပ်ရုံ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာလုပ်သား ၁၇၀ ကျော်ကို ထိုင်းအလုပ်ရှင်က ကြိုတင်အသိပေးခြင်း မရှိဘဲ စက်ရုံပိတ်၍ အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ သည်။
တစ်ကျော့ပြန်ကချင်စစ်ပွဲ ရှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒပြ
ကချင်ပြည်နယ်တွင် တစ်ကျော့ပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု ရှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ချီတက်ဆန္ဒပြမှုကို ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားသူလူငယ် ၅၀ ခန့်က ယမန်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ပြု လုပ်ခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၃ ရက်က တပ်မ တော်နှင့် ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (AA) တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် မင်းပြားမြို့နယ် စပါးထားကျေး ရွာနေ ဒေါ်မဝိုင်းကြည်အပါအဝင် ဒေသခံ ၂၀၀ ခန့် ရွာဦးဘုန်း တော်ကြီးကျောင်း၌ ခိုလှုံနေစဉ် လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက် သဖြင့် ခြောက်ဦးသေဆုံ
အသိအမှတ်ပြုမှုမရှိသည့် တက္ကသိုလ်နှစ်ခုနှင့် ရာထူးဝန်အဖွဲ့ ပူးပေါင်းမှု အဂတိရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပေးရန် ကော်မရှင်ထံတိုင်ကြား
သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများက အသိအမှတ်ပြုမထားသည့် ပြည်ပတက္ကသိုလ်နှစ်ခုနှင့် ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အဂတိလိုက်စား မှု ရှိ၊ မရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန် ကိုနေယံဦးက ဇွန်လ၅ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင
မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ပြန်လည်လျှောက်ထားသူများတွင် ၂၀၀ ကျော် ခွင့်ပြုပေးဟုဆို
နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှား မှုကြောင့် ပြည်ပသို့တိမ်းရှောင် ရသူများအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ သားဟောင်းများကို နိုင်ငံသား အဖြစ်ပြန်လည်လက်ခံရာ ရှစ်နှစ် အတွင်းလျှောက်ထားသူ ၂၉၇ ဦးအနက် ၂၁၁ ဦးကိုခွင့်ပြု ပေးထားကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အ
ဘက်စုံကောင်းမွန်သည့် မြို့ပြများဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ရေးဆွဲထားသည့်ဥပဒေကြမ်း လွှတ်တော်သို့တင်သွင်း
ဘက်စုံကောင်း မွန်ပြီး စနစ်ကျသည့် မြို့ပြစီမံ ကိန်းများရေးဆွဲနိုင်ရန် မြို့ပြနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဥပဒေ ကြမ်းကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန် ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော် လင်းက ဇွန်လ ၅ ရက်အမျိုးသား လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့တင် သွင်းခဲ့သည်။
မန္တလေးမြို့နေ အသက်(၇၃)နှစ်အရွယ်အမျိုးသား လာမည့်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ထပ်မံဖြေဆိုမည်ဟုဆို
၂၀၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင် တန်းစာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆို သည့် အသက်(၇၃)နှစ်အရွယ် ဦးစိုင်းအောင်ညွန့်သည် ယခုနှစ် စာမေးပွဲတွင် မအောင်မြင်သော် လည်း လာမည့်နှစ် ဆက်လက်ဖြေဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆယ်တန်းအောင်သွားလို့ ဂီတကို ပိုလုပ်ဖြစ်တော့မယ့် မေသက်ထားဆွေ
ဂုဏ်ထူးထွက်ရန် ခက် ခဲ့သည့် မြန်မာစာဂုဏ်ထူးရရှိ သောကြောင့် ပို၍ ပျော်ရွှင်ရ ကြောင်း နှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် မေသက်ထားဆွေက ပြောသည်။
အနုပညာအလုပ်တွေကို လျှော့တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗို
မိသားစုနှင့် ဘာသာ တရားအတွက် အချိန်ပေးလိုသော ကြောင့် အနုပညာအလုပ်ကို နောက်ထပ်လုပ်ဖြစ်ချင်မှ လုပ်ဖြစ်မည်ဟု သရုပ်ဆောင် ထွန်းအိန္ဒြာ ဗိုက ပြောသည်။
ဂီတနဲ့သရုပ်ဆောင် အလုပ်နှစ်ခုလုံးလုပ်မယ့် Apink အဖွဲ့ဝင် ဂျောင်အန်ဂျီ
သဘာဝလွန်လျှို့ဝှက် ဆန်းကြယ်အရာများကို စုံစမ်းစစ် ဆေးသော စာသင်ကျောင်းက လပ်တစ်ခုအကြောင်း ရိုက် ကူးထားသော 0.0 MHZ သည်း ထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားနှင့် ပတ် သက်၍ အမျိုးသမီးကေပေါ့ပ် Apink အဖွဲ့ဝင် ဂျောင်အန်ဂျီက တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင် ဖြေကြားသည်။
တောင်ကြီးမြို့နယ်တွင် စည်ပင်အခွန်များ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည်
တောင်ကြီးမြို့နယ် အတွင်း စည်ပင်သာယာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကို အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည်ဖြစ် ကြောင်း မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
Fast & Furious9ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် ဂျွန်စီးနာ
ကိုးကားမြောက် Fast & Furious ဇာတ်ကားတွင်နပန်းသမားဂျွန်စီးနာပါဝင်သရုပ် ဆောင်မည့်အကြောင်းနှင့် ပတ် သက်၍ ယင်းဇာတ်ကား၏ ပင် တိုင်မင်းသားဗန်ဒီဇယ်က ဧပြီအ တွင်း အင်စတာဂရမ်တွင် နောက် ပြောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ Universal ကုမ္ပဏီက ဂျွန်စီးနာပါဝင်မည်ဖြစ် ကြောင
ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်ချက် ၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကျဆင်း
၂၀၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို ဇွန်လ ၈ ရက်က ထုတ်ပြန်ရာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အောင် ချက် ၃၁ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ယခင်နှစ်ထက် ၁ ဒသမ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။
ပုဂံ သဗ္ဗညုဘုရား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို ပြည်သူများအား လေ့လာခွင့်ပြု
သဗ္ဗညုဘုရားအား မိုး ရာသီမတိုင်မီ အရေးပေါ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းနေမှုများကို ပြည်သူ များသို့ သုံးရက်ကြာ လေ့လာ ခွင့်ပြုထားကြောင်း ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခွဲ)မှ သတင်း ရရှိသည်။
မင်းကင်းမြို့နယ်တွင် မူလွန်ကျောင်း အဆင့်တိုးမရ၍ အလယ်တန်းကျောင်းသား ၄၀ ကျော် ပညာသင်ရန် ခက်ခဲနေ
မင်းကင်းမြို့နယ် နှင်းကြီးကျေးရွာတွင် မူလတန်းလွန်ကျောင်းအဆင့် တိုးမရသဖြင့် အလယ်တန်းကျောင်းသား ၄၀ ကျော် ပညာသင်ကြားရန် အခက်အခဲဖြစ်နေ ကြောင်း နှင်းကြီးကျေးရွာတာဝန် ခံဦးထွန်းထွန်းနိုင်က ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘတ်ဂျက် ကိစ္စဆွေးနွေးရန် တိုင်းလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကို ဇွန် လ ၁၁ ရက်တွင် ခေါ်ယူထား ကြောင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ နယ် တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးလှဌေးက ပြောသည်။
အင်းစိန်ထောင် အကျဉ်းသား ၅၂ ဦး တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်မြင်
အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်း ထောင်မှ အကျဉ်းသားကျောင်း သား ၅၂ ဦး ၂၀၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီး သုံးဘာ သာဂုဏ်ထူးလေးဦး၊ နှစ်ဘာသာ ဂုဏ်ထူး ၁၃ ဦး၊ တစ်ဘာသာဂုဏ် ထူး ၁၀ ဦး ရရှိသည်။
NCA လက်မှတ်ထိုး ၁၀ ဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး ထိုင်းအာဏာပိုင်များကန့်ကွက်၍ ကျင်းပခွင့်မရ
ချင်းမိုင်မြို့၌ ပြုလုပ်မည့် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ထိုး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၁၀ ဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အစည်း အဝေးကို ထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင် များက ကန့်ကွက်၍ အစည်းအဝေးပျက် ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်တို့သည် လာမည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ယမန်နေ့တွင
ဧရာဝတီနှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ရေ လက်ရှိရေမှတ်များထက် မြင့်တက်လာနိုင်
အနောက်တောင်မုတ်သုံလေ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်နေစဉ် ဒေသအနှံ့ မိုးရွာနေပြီး ဧရာဝတီနှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ရေသည် လက်ရှိရေမှတ်များထက် မြင့် တက်လာနိုင်ကြောင်း မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ကော့ဘဇားရှိ ဒုက္ခသည်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏ ခွင့်ပြုချက်မရသေး
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးကော်မရှင်သည် ကော့ဘဇား သို့သွား၍ ဒုက္ခသည်များနှင့် တွေ့ ဆုံရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက် မရရှိသေးကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးချမ်းအေးက ပြောသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ ကနူး/ကယက် လှေလှော်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာကစားသမားငါးဦး ၀င်ပြိုင်မည်
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် အရှေ့တောင်အာရှ ကနူးကယက် ချန်ပီယံရှစ် လှေလှော် ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကစားသမားငါးဦး ၀င်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။
တစ်ဖက်လူ၏အာရုံစိုက်မှုရရှိအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ သင်စိတ်ဝင်စား နေသူတစ်ဦး သတိပြုမှုရရှိအောင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် မလွယ်ကူပေ။ အပြု သဘောခန္ဓာကိုယ်အပြုအမူ၊ ယုံကြည်ချက်များထူထောင်၍ စတွေ့တွေ့ ချင်း အထင်ကြီးအောင် လုပ်နိုင်သည်။ အလျင်အမြန်အာရုံဖမ်းစားနိုင် သော နည်းလမ်းများလည်း ရှိပါသည်။
MIU ဖူဆယ်အသင်း အာဆီယံပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ ခြေစမ်းပွဲ သုံးပွဲယှဉ်ပြိုင်မည်
MIU ဖူဆယ်အသင်း သည် အာဆီယံဖူဆယ်ကလပ် ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခြေစမ်းပွဲ သုံးပွဲကစားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသင်းနည်းပြချုပ် ဦးသန်းဝဏ္ဏအောင်က ပြော သည်။
၂၀၂၀ ယူရိုခြေစစ်ပွဲများတွင် စပိန်နှင့်ပိုလန် အခြေအနေကောင်းနေ
စပိန်နှင့်ပိုလန်က သုံးပွဲ ဆက် အနိုင်ရရှိမှုနှင့်အတူ ၂၀၂၀ ယူရိုခြေစစ်ပွဲတွင် ရာနှုန်းပြည့် ရလဒ်ကောင်းမွန်မှု ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။
No. 2185, Sunday, July 21, 2019
No. 2184, Saturday, July 20, 2019
No. 2183, Friday, July 19, 2019
No. 2182, Thursday, July 18, 2019
No. 2181, Tuesday, July 16, 2019
No. 2180, Monday, July 15, 2019
No. 2179, Sunday, July 14, 2019
No. 2178, Saturday, July 13, 2019
No. 2177, Friday, July 12, 2019